Fanosihosena mamy nandritra ny fitondrana vohoka
Ny fihenan'ny legina mandritra ny fitondrana vohoka dia fahita mahazatra eo amin'ny reny mitaiza. Amin'ny fiafaran'ny andro, ny vehivavy bevohoka dia mihazakazaka mandroso sy mandry, na izany aza, ao anatin'ny minitra fialan-tsasatra voalohany, ny hozatry ny hozatra na ny lamosin'ny tongony ambany dia tampoka noho ny fanaintainana lalina, ary ny tongony dia mamiratra ary mihazakazaka toy ny hoe te-hijanona amin'ny tendrony. Ny tratra an-jazakely mandritra ny fitondrana vohoka dia mety haharitra hatramin'ny minitra maromaro ary matetika dia lasa namana tsy mahazo aina mandritra ny vanim-potoan'ny fitondrana. Ny trompetra dia manitsaka ny tongotra mandritra ny fitondrana vohoka ary tsy amin'ny reny rehetra. Ireo vehivavy izay mpinamana amin'ny fanatanjahan-tena hatramin'ny fahazazana, dia zatra amin'ny adin-tsaina ara-batana ary manana ny fahaizana mifehy ny hozany - dia tsy dia misy dikany loatra amin'ireo trangan-javatra mampidi-doza ireo ary ny fihenan'ny vehivavy bevohoka dia tsy mahafantatra afa-tsy ny fihainoana.
Indraindray dia tsy manana toerana voafaritra mazava ny fiampangan'ny vehivavy bevohoka. Tsy dia mahazatra loatra ny fifehezana ny tanana mandritra ny fitondrana vohoka, saingy mihatsaravelatsihy kokoa izy ireo ary sarotra kokoa amin'ny vehivavy.
Inona no ilaina aloha mba hialana amin'ny fanesorana ny fitambaran-tsetroka sy ny fanesorana fanaintainana mahery vaika?
miaraka amin'ny ezaka, eny, na dia eo aza ny fanaintainana, mihamitombo tsikelikely, mihasimba ny hozatra;
ny filatsaham-botoana, ny fikolokoloana ary ny fanakorontanana ny olana dia hilaina;
Afaka manamaivana ny fanaintainana ianao amin'ny fandefasana dite sarotra na mafana amin'ny hozatra mihamatanjaka.
Nahoana no mihetsiketsika ny fotsy mandritra ny fitondrana vohoka?
Misy dikan-teny maromaro. Araka ny voalazan'ny iray amin'izy ireo, dia voaporofo ny fiampangan'ny vehivavy bevohoka noho ny fiakaran'ny vidin'ny ranjony. Indrindra indrindra fa ity antony ity dia manan-danja ao anatin'ny telo volana farany amin'ny maha-bevohoka azy. Fanampim-pandaharana iray hafa, noho izany dia mampihena ny tadin'ny tongotra rehefa Ny fitondrana vohoka - tsy fahampiana amin'ny vatan'ny renim-pianakaviana amin'ny kalesy, magnesium, phosphor ary vitamin C.
Mba hisorohana ny tsiranoka ao amin'ny zanak'omby mandritra ny fitondrana vohoka, dia afaka manoro hevitra ianao hitarika fialam-boly mavitrika, hanome fotoana ny hilomano, yoga ary fohy mandeha eny an-kalamanjana. Aoka ho azo antoka ny mihaino tsara ny fanaraha-maso ny sakafo. Ilaina ny mampitombo ny fihinanana vokatra avy amin'ny vokatra avy amin'ny vokatra, ny ravin-kena, ny voankazo, ny lentils ary ny legioma hafa. Ny tsy mahafa-po dia ho aviavy, paoma, citrus ary voatabia. Voaporofo fa mampihena ny mety ho fisamborana ny vegetarianisme.
Ny fitsaboana ny tranon-jaza amin'ny fitondrana vohoka
Syphilis amin'ny fitondrana vohoka - inona no manohintohina ny reny sy ny zaza?
Isam-bolana mandritra ny fitondrana vohoka
Inona no azonao atao momba ny aretina mandritra ny fitondrana vohoka?
Firy andro no lanin'ny kibo alohan'ny fiterahana?
Inona no mety ho bevohoka amin'ny aretim-pivalanana?
16 herinandro ny fitondrana vohoka - habaka fetal
Iodomarin 200 ao amin'ny fitondrana vohoka
Tora-kofehy tsy ara-dalàna - ny antony
Vehivavy kiraro avo loko
Ny fomba fanaovana pancakes amin'ny lavaka
Fanomezana zaza iray isaky ny 1 taona
Teratany Thuya - fambolena sy fiahiana
Ny aretina hemolytika amin'ny zaza vao teraka
Ahoana no hanamboarana herringa any an-trano?
Nahoana ny saka no matahotra ny rano?
29 "lahy antitra" izay ao amin'ny kaonty roa no hitondra anao amin'ny adala
Ny fantsika voajanahary - famolavolana 2016